Anyị na-agwa gị ihe edamame bụ, njirimara ya na etu esi ewere ya | Nutri Nri
Paul Heidemeyer | | Alimentos, Nri
Edamame na-aza ụlọ ọtụtụ mmadụ. Ikekwe ị maghị kpọmkwem ihe nri a bụ, ihe ngwongwo ya bụ ma ọ bụ etu esi eri ya. Echegbula, n'okpuru, anyị ga-agwa gị ihe niile n'ụzọ zuru ezu.
Ihe oriri nke soy na-arịwanye elu, ọ gbasaa n'ụwa nile. Edamames bụ nri dị mma, bara ọgaranya na nri na ezigbo iji mee ka ha dị ka nri siri ike.na edamame si na soybean, aha ya na-ezo aka na efere e ji ahịhịa a na-acha akwụkwọ ndụ, ọ bụghị ngwaahịa n'onwe ya. Nke ahụ bụ, akpọghị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ pods edamame Nkwadebe dị mfe, akụkụ nke mere ka ọtụtụ mmadụ webata ya na nri ha.
1 Gịnị bụ edamame?
2 Njirimara Edamame
3 Kedu ka isi eri ya?
4 Ebe izu ya
Gịnị bụ edamame?
Edamame bụ pọd ma ọ bụ agwa agwa nke soybean, a chịkọtara ha tupu ha eto. Ha bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ụcha dị ka peas na agwa anyị maara. O sitere na ndi legume na nha ya pere mpe. N'ime ahịhịa na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ anyị na-ahụ n'etiti 2 ma ọ bụ 3 soybean bundles na ha nwere nnukwu oghere n'etiti ha.
Aha ahụ, Ejiri obere ntutu kpuchie ya, ihe e ji mara iji mara otu esi amata ọdịiche dị na ha na mkpo ọhụrụ ndị ọzọ.
Na-esote, anyị na-agwa gị ihe bụ ezigbo arịa na uru nke edamame.
Ọ bụ nnukwu isi iyi nke ndi na-edozi akwukwo nri.
Ọ na-apụta ìhè na nnukwu ọdịnaya ya calcium na ígwè.
Nri a bu obere abụba, nke zuru oke maka ndị niile na-achọ ibelata ma ọ bụ ịchịkwa cholesterol.
Ọ antioxidant Njirimara, ekele ya elu ọdịnaya nke isoflavones. Isoflavones na-enyere ụmụ nwanyị aka menopausal iji nọgide na-enwe ezigbo akpụkpọ na organism.
El - aha ụtụtụ na - etinye ọgwụ magnesium, nke na - eme ka ahụkpụkpụ dịkwuo mma.
Ọdịdị ya dị elu na protein dị elu na-eme ka ọ bụrụ nri nwere ike ijupụta anyị n'ike.
Ọ nwere nnukwu ọdịnaya dị elu eriri. Maka nke ọ bụla 100 grams nke edamame anyị nwetara 8 grams nke eriri.
Ọ bụ nri na-enweghị nri, yabụ ndị na-arịa ọrịa gluten nwere ike were ya na-enweghị nsogbu.
Na-edebe nke anyị ike dịghịzi usoro.
Ọ bụ nnukwu isi iyi nke ike.
Ọ na-atụ aro ya ndị mmadụ onye mamiri
Belata nsogbu akụrụ
Mee ka ahụ ike anyị.
Na-egbochi anaemia maka akwa eriri ya.
Edamame, dika o sitere na soybean, ọ na-emekwa ka anyị indices na-esonụ bekee:
Nri akwukwo nri.
Kedu ka isi eri ya?
El edamame Ọ dị mfe iri nri, a na-akwado ya ngwa ngwa ma nsonaazụ ya dị egwu. N'oge a na-eri nri, a na-emeghe pọd ahụ site n'enyemaka nke ezé ma ọ bụ aka, site na ire anyị na-anakọta ọka n'ime ya ma tụfuo ya. Ọ bụ ihe dị ka iri ọkpọkọ.
Kacha nkịtị na mfe bụ obụpde ha na mmiri nwere obere nnu. Ihe dị ka nkeji 3 ma ọ bụ 5. Ozugbo esiri anyị, anyị nwere ike soro ha na mmanụ flakes ma ọ bụ ụfọdụ ose. N'aka nke ozo, anyi nwere ike wepu nkpuru ma tinye ha na salad, ma obu tinye ha na pan na obere ogwu ogwu na galik.
Ihe kwesiri ekwesiri iwere ya dika ihe eji emeghe iheA na-ewebata ya na pọd ahụ dum, anyị na-eri ha dịka ha bụ ọkpọkọ. Enwere ike ịmụrụ ha ọkụ ma ọ bụ oyi. Nri ya adịghị nwayọọ ma jikọta ọnụ ọgụgụ buru ibu nke nri.
Ebe izu ya
Ka ọ dị ugbu a, mgbe ama ama nri a, anyị nwere ike ịchọta edamame n'akụkụ dị iche iche na ahịa nke mmadụ niile maara nke ọma. Anyị nwere ike ịchọta ya n'ụdị dị iche iche, nke ọhụrụ, mkpụrụ, dị njikere iri ma ọ bụ oyiMgbe ahụ, anyị ga-agwa gị ebe ị ga-enweta nri a na-atọ ụtọ.
En Amazon Spain Enwere ike ịzụta mkpụrụ osisi edamame maka ịkọ ihe.
Na nnukwu ụlọ ahịa Lidl Anyị na-ahụ ya oyi, na usoro gram 400.
En Mercadona, otu n'ime nnukwu ụlọ ahịa ndị Spen na ebe ha nọ na-agwụcha ugbu a, anyị na-ahụ ya na gram 500 dị na ngalaba oyi.
En nrutu Anyị na-achọta ya n'ụdị pere mpe, gram 100 nke edamame dị njikere iri, ụzọ zuru oke iji nwalee ya ma ọ bụrụ na ị maghị ya.
En Ibanye, na nnukwu ụlọ ahịa a anyị hụrụ ya na usoro gram 300 miri emi.
El Courtlọ ikpe Bekee, anyị na-ere edamame na ọnụọgụ nke gram 500, ị ga-ahụ ya na ngalaba oyi.
La SirenSuperlọ ahịa a, nke na-erekarị ngwaahịa oyi, azụkwala edamame, na ụdị gram 400.
Edamame O nwere ọnụahịa nke sitere na 1,80 4 ruo euro XNUMX, dabere na ika na oke.
Ọ bụrụ na ibi n’obodo dị ọkara, ị ga - ahụrịrị nhọrọ nke inweta edamame, n’ụdị ọ bụla. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịnwetaghị ya, ịnwere ike ịtụ ya na ntanetị, ugbu a enwere ọtụtụ ibe weebụ yana ụlọ ahịa dị n'ịntanetị nke na-enye anyị ngwaahịa ha ọhụụ ma zigara anyị ya na obere oge.
Gaa n'ihu ma nwaa nri a siri ike na otu esi ewu ewu. Nhọrọ zuru oke maka nri ngwa ngwa, anaghị enwe calorie ma na-atọ ụtọ. Jiri usoro nri gị gwuo egwu ma tinye ya n'ụzọ kachasị masị gị. O doro anya na ị ga-enye efere gị aka zuru oke.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nutri Nri » Nri » Anyị na-agwa gị ihe edamame bụ, njirimara ya na etu esi ewere ya
Ndụmọdụ 4 + 1 maka isi nri na CBD
Gịnị bụ tonip